San Myanmar Proposal by Ngwe Tun 815 views
Genius farm partner - English by Ngwe Tun 495 views
Genius Shan Highlands Coffee Profile by Ngwe Tun 483 views
Masterpiece by Ngwe Tun 312 views
Genius farm partners program by Ngwe Tun 436 views
Genius Shan Highlands Coffee by Ngwe Tun 1097 views
Genius Farm Partner isanetwork who trust the value added production in agriculture sector in Shan Highlands. It is crowdfunding program and will have multiple benefits.
1. ဉာဏ်ကကီြီးရှင်ကကာ်ဖီကို အာြီးက ြီးကသာက်သိုြီးသူမ ာြီးခင်ဗ ာ။ အ ောင်အေလင််းထွေ််း ကုမ္ပဏီသည် ရှမ္််းပြည်ေယ်၊ ရွောငံအေသတွင် အပြေစုက်၍ ရည် အသွ်းပမ္င့်် အကော်ဖီမ္ ော်းကု စစစ်အရွ်းြေ ယ်ကော နုင်ငံတကော ဆင့််မ္ှီ ထုတ်ကုေ် အကော်ဖီအစ့် ကုေ်ကကမ္််းမ္ ော်းနှင့်် သွင််းကုေ် စော်းထု်း တေ်ဖု်းပမ္ြှင့်် အလှော်ပြီ်း အကော်ဖီအစ့်မ္ ော်းနှင့်် အကော်ဖီမ္ှုေ် ့်မ္ ော်းကု ထုတ်ြု်းမ္ှု ဆင့််ပမ္င့််ပြီ်း ၂၀၁၂ ြေုေစ်မ္ှစတင်၍ ထုတ်လုြ်ြေ့်ြါသည်။ ဉောဏ်ကကီ်းရှင် (Genius) ကုေ် မ္ှတ်တံဆြ်ပဖင့်် သင့််အသောက်သံု်းနုင်အသောအကော်ဖီမ္ှုေ် ့်၊ အလှော်ပြီ်းအကော်ဖီအစ့်မ္ ော်းကု ၄ အ ောင်စ၊ ၈ အ ောင်စ၊ ၁ အြါင် ရွယ် စော်းမ္ ော်းပဖင့််ထုတ်လုြ်ပြီ်း ပြည်တွင််းတွင် ပဖေ် ့်ပဖ ်းအရောင််းြေ အေြါသည်။ တစ်ြေါသံု်း ရွယ် စော်း အကော်ဖီ အေပဖင့်် အရစစ်အကော်ဖီ (Drip Coffee)၊ သင့််သံု်းအကော်ဖီ (ReadyMade Coffee) မ္ ော်းကုလည််း နုင်ငံတဝှမ္််းတွင် ပဖေ် ့်ပဖ ်း အရောင််းြေ အေြါသည်။ အရပြော ုင် (bluepond specialty coffee) ကုေ် မ္ှတ်တံဆြ်ပဖင့်် ကကီ်းဆံု်းအကော်ဖီအစ့်မ္ ော်းကု စေစ်တက အရွ်းြေ ယ်ပြီ်း နုင်ငံတကောမ္ှ အကော်ဖီအသောက်သံု်းသူမ္ ော်း ကကြိုက်ကုက်ညီအစရေ် မ္တူ်းြေါ်းအစြ ေံ ့် ရသောပြည့််စံုသည့်် အလှော်ပြီ်းအကော်ဖီအစ့်မ္ ော်းကု ၅၀၀ ဂရမ္် ရွယ် စော်း ထုတ်ြု်းမ္ှု ပဖစ် အရောင််းြေ အေြါသည်။
2. ဉောဏ်ကကီ်းရှင် အကော်ဖီစုက်ြ ြို်းအရ်းပြေံ (Genius Coffee Estate) သည်ရွောငံပမ္ြိုြို့ေယ် ရွောမ္ရြ်ကွက် အြေတတ ောလမ္််းတွင် တည်ရှပြီ်း၊ အကော်ဖီက တ်ြေွစက်ရံု၊ အကော်ဖီလှမ္််းကွင််း၊ အကော်ဖီ ဂုအထောင် နှင့်် သဘောဝြတ်ဝေ််းက င်အလ့်လောနုင်ပြီ်း အကော်ဖီထုတ်လုြ်ြံု ဆင့််ဆင့််ကု အလ့်လောသင်ယူနုင်သည့်် ေော်းယူစြေေ််း တစ်ြေုလည််းြါဝင်ြါသည်။ ေော်းယူတည််းြေုနုင်သည့်် မ္သော်းစု ြေေ််း (၄) ြေေ််းနှင့်် လူ ၂၀ တည််းြေုနုင်သည့်် သီ်းပြေော်း ြေေ််းမ္ ော်း၊ စော်းအသောက်ြေေ််းမ္ှ၊ အကော်ဖီဆုင် နှင့်် လူ၃၀ဆေ် ့်ြေေ််းမ္တစ်ြေုလည််း ြါရှြါသည်။ အတော/အတောင်သဘောဝမ္ ော်း၊ သဘောဝသံယံဇောတမ္ ော်းနှင့်် အ ်းြေ မ္််းလံုပြေံြိုအသောအေသ ြတ်ဝေ််းက င်တွင် အကော်ဖီသီ်းမ္ ော်းကု ကုယ်တုင် ြေူ်းဆွတ်ရင််း အေသြေံမ္ ော်း၏ ရင််းနှီ်းြ ငှောမ္ှုမ္ ော်းကု အတွြို့ထြေံစော်းနုင်ြါသည်။
3. အကော်ဖီြင်သည် စတင်စုက်ြ ြို်းရောမ္ှ ၃နှစ် ကကောတွင် ြေ််းမ္ ော်းြွင့််ပြီ်း သီ်းစတင်ြေူ်းဆွတ် နုင်ြါသည်။ အကော်ဖီြေ််းမ္ှ ပဖ အရောင်ပဖစ်ပြီ်း ဧပြီလတွင် ဖူ်းမ္ ော်းနှင့်် ြေ််းြွင့််မ္ ော်းကု အတွြို့ ရှနုင်ြါသည်။ အကော်ဖီသီ်းမ္ ော်းကု ြေ််းြွင့််မ္ ော်း အ ကက ပြီ်း စမ္််းအရောင်မ္ ော်း အေပဖင့်် ၇-၈လကကောအတွြို့ ပမ္င်နုင်ြါသည်။ ရွောငံအေသတွင် အကော်ဖီသီ်းမ္ ော်း ရင့််မ္ှည့််ပြီ်း စမ္််းအရောင်မ္ှ ေီအရောင်သု ့် အပြောင််းလသွော်းပြေင််းကု နုဝင်ဘောလကုေ်ြုင််း (သီတင််းကျွတ်လ)မ္ှစတင်၍ ပမ္င်အတွြို့ နုင်ြါသည်။ ထု ြေ ေ်တွင် အကော်ဖီသီ်းမ္ ော်းကု ြေူ်းဆွတ်ရပြီ်း ြေွံြေျွတ်ပြေင််း၊ ြေ ဉ်အဖောက်ပြေင််းနှင့်် အေလှမ္််းပြေင််းမ္ ော်းကု ပြြိုလုြ်ရြါသည်။
4. အကော်ဖီအတောင်သူမ္ ော်းမ္ှ အကော်ဖီသီ်းစုမ္ ော်းကု လက်ပဖင်ြေူ်းဆွတ်ပြီ်း အေ ့်ပြေင််း သု ့်မ္ဟုတ် ၅ရက်အ ်းအေ ့်တွင် လောအရောက်အရောင််းြေ ြါသည်။ လောအရောက်အရောင််းြေ အသော အကော်ဖီသီ်းမ္ ော်းကု ြသောြေ ေ်ပဖင့််ဝယ်ယူပြီ်း မ္ှုက်မ္ ော်း၊ မ္ရင့််မ္ှည့််အသော သီ်းစုမ္ ော်းနှင့်် ရင့််မ္ှည့််လွေ်အသော သီ်းမ္ ော်းကုဖယ်ရှော်းအြ်းရြါသည်။ လတ်ဆတ်အသော အကော်ဖီ သီ်းစုမ္ ော်းကု ၂၄-၃၆ ေောရီ တွင််း သီ်းြေွစတ်ပြေင််း၊ ြေ ဉ်အဖောက်ပြေင််းနှင့်် အေြူလှမ္််းပြေင််းမ္ ော်းကု လုြ်အဆောင်ရြါသည်။ အကော်ဖီသီ်းမ္ ော်းကု ြေူ်းဆွတ်သည့််ရောသီတွင် ဝယ်ယူပြီ်း တစ်နှစ်စောသုအလှောင်ထော်းရြါသည်။ သုအလှောင်သည့်် ြေ ေ်တွင် လွေ်ဂရုစုက်ရပြီ်း မ္ု်းလံုအလလံုပဖစ်အစရေ်နှင့်် အရအငွြို့မ္ ော်းထအတွမ္ှုမ္ရှအစရေ် ထူ်းဂရုပြြို လုြ်အဆောင်ရြါသည်။
5. အကော်ဖီသီ်းစုမ္ ော်းကု ဝယ်ယူရောတွင် အ ောက်ြါေည််းလမ္််းမ္ ော်းကု က င့််သံု်းပြီ်းဝယ်ယူလ က်ရှြါသည်။ (က) ြွစော်းမ္ ော်း လံု်း ရင််းပဖင့်် သီ်းစုမ္ ော်းရရှနုင်သည်။ ရည် အသွ်းသတ်မ္ှတ်ပြေင််းမ္ပြြိုလုြ်နုင် (ြေ) ဇုေ်ြေွတောဝေ်ြေံမ္ ော်း လံု်း ရင််းပဖင့်် သီ်းစုမ္ ော်းရရှနုင်သည်။ ရည် အသွ်းသတ်မ္ှတ်၍ ဝယ်ယူနုင်။ (ဂ) ပြေံရှင်ကကီ်းမ္ ော်း အကော်ဖီ သီ်းစု အကောင််းစော်းမ္ ော်းကု ပြေံလံု်းပြတ်ဝယ်ယူ၊ ရည် အသွ်းအကောင််းဆံု်းရ အကော်ဖီသီ်းစုမ္ ော်းကု လက်ငင််းအငွအြေ စေစ်ပဖင့်် ဝယ်ယူရပြီ်း၊ အကော်ဖီသီ်း ရည် အသွ်းအြေါ်မ္ူတည်၍ အ ်းနှုေ််းမ္ ော်း တု်းပမ္ြှင့််အြ်းရြါသည်။ ပြီ်းြေ့်သည့််နှစ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ရောသီတွင် ပမ္င့််ဆံု်းအ ်းနှုေ််း သီ်းစု တစ်ကီလု ၆၀၀ က ြ် ထအြ်းြေ့်ရြါသည်။ အကော်ဖီကုေ်ကကမ္််း ၁ကီလု ရရှရေ် တွက် သီ်းစု ၅ကီလု လု ြ်ြါသည်။ သီ်းစု ၅ ကီလု တွက် ၃၀၀၀ က ြ်နှင့်် ကုေ်ကကမ္််း ပဖစ်သု ့် အရောက်ရေ် တွက် ၁ ကီလုတွင် ၃၀၀ က ြ်ြေေ် ့်သံု်းစွရြါသည်။ လုြ်သမ္ော်းြေ၊ လျှြ်စစ်မ္ီတောြေ၊ သယ်ယူြု ့်အဆောင်အရ်းနှင့်် အထွအထွကုေ်က စရတ်မ္ ော်း ြါဝင်သည်။ အကော်ဖီ ကုေ်ကကမ္််းတစ်တေ် တွက် ၃၃ သေ််းအက ော် က သင့််ြါသည်။ အလှော်ရေ် တွက် ကုေ်ကကမ္််းမ္ ော်းကု ပြေ်လည်သေ် ့်စင် အြ်းရြါသည်။ ရွယ် စော်းမ္ ော်း ြေွပြေော်းအြ်းရြါသည်။ ထုလုြ်ငေ််းစဉ် တွက် အကော်ဖီအစ့် ကကမ္််းတစ်တေ်ကု က ြ် ၂ သေ််းြေေ် ့်နှင့်် လူ င် ော်း ၄ ဦ်းပဖင့်် ရက် ၂၀ ြေေ် ့်ကကော သေ် ့်စင်ရေ်လု ြ်ြါသည်။
6. ကကာ်ဖီစိုက်ခင်ြီး စီြီး ာြီးဖက်မ ာြီးကို ဖတ်ကခေါ် ခခင်ြီး။ ဉောဏ်ကကီ်းရှင် အကော်ဖီလုြ်ငေ််းကု ဆက်လက်တု်းြေ ြို့လုြ်ဆောင်ရေ် တွက် စီ်းြွော်းဖက်မ္ ော်းကု ဖတ်အြေေါ်လုြါသည်။ ရင််းနှီ်းပမ္ြိုြ်နှံမ္ှုကု စတ်ဝင်စော်းပြီ်း အကော်ဖီကု ကကြိုက်နှစ်သစ်သူမ္ ော်း တွက် ရင််း နှီ်း ၆လ ြေေ် ့်ထည့််ရံုပဖင့်် ပမ္တ်အငွ အသြေ ောသည့်် လုြ်ငေ််းနှင့်် မ္တ်ဆက်အြ်းလုြါသည်။ ဉောဏ်ကကီ်းရှင်လုြ်ငေ််းမ္ှော ြံုမ္ှေ် ော်းပဖင့်် အငွအကက်း ရင််း နှီ်း မ္လု ြ်ြ လုြ်အဆောင်လ က်ရှြါသည်။ အကော်ဖီြေူ်းဆွတ်သည့််ရောသီမ္ှစ၍ အတောင်သူမ္ ော်းကု ကကြိုတင်အငွအြ်းပြေင််းနှင့်် အကော်ဖီြေွစတ်သည့်် ကရယောမ္ ော်းဝယ်ယူပြေင််း၊ သုအလှောင်သည့်် ြေေ််းမ္ ော်းနှင့်် ထုတ်ြု်းြစစည််းမ္ ော်းကု ဝယ်ယူပြေင််း တွက် အငွအကက်း ရင််း နှီ်းမ္ ော်းလု ြ်လောြါသည်။ ထုအငွအကက်း ရင််း နှီ်းမ္ ော်းကု ပြင်ြမ္ှအြေ ်းယူပြေင််း၊ ဘဏ်မ္ှအြေ ်းယူပြေင််းေည််းလမ္််းမ္ ော်းကု သံု်းပြြို၍ ပြီ်းြေ့်အသော ရောသီမ္ ော်းတွင် လုြ်အဆောင်ြေ့်ြါသည်။ ပြည်တွင််းထုတ်ကုေ်ပဖစ်အသောလည််း အငွအကက်း ရင််း နှီ်း မ္လံုအလောက်မ္ှုအကကောင့်် အြေ ်းယူအငွမ္ ော်း တွက် တု်းမ္ ော်းအြ်းရြါသည်။ ထု တု်းအငွမ္ ော်းသည့်် ကုေ်အြေ ောတွင် တုက်ရုက် ထြ်ြု်းတင်ရြါအသောအကကောင့်် အ ်းနှုေ််းမ္ ော်း ပမ္င့််တက်လောရြါသည်။ ဉောဏ်ကကီ်းရှင် အကော်ဖီလုြ်ငေ််း အေပဖင့်် က ြို်း ပမ္တ်ရှအသော အရရှည်တည်တံသည့်် တေ်ဖု်းပမ္ြှင့်် လုြ်ငေ််းတစ်ြေုကု အေသြေံမ္ ော်း က ြို်းသက်သက်ရည်ရွယ်ပြီ်း အကော်ဖီအစ့်မ္ှသည် အကော်ဖီဆုင်မ္ှ အသောက်သံု်းသူထံသု ့် ရည်ရွယ်လုြ်အဆောင်အသော မ္ ော်း က ြို်းပြြိုလုြ်ငေ််းပဖစ်ြါသည်။ ထုလုြ်ငေ််းတွင် ဉောဏ်ကကီ်းရှင် အကော်ဖီကု ကကြိုက်နှစ်သက်ပြီ်း သံု်းအဆောင်သူမ္ ော်းကု က ြို်း ပမ္တ်မ္ ော်း မ္ျှအဝြေံစော်းရင််း ရည် အသွ်းကု ထမ္််းသမ္်၍ ဆက်လက်တည်တံ့်အ ောင်လုြ်အဆောင်လုြါသည်။ စီ စဉ် အသ်းစတ်မ္ှော နုဝင်ဘောလ ၂၀၁၅ မ္ှ အဖအဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၆ တွင််း အငွ ရင််းနှီ်း ၁ သေ််းက ြ်မ္ှ စတင် ထည့််ဝင်ပြီ်း ၆လ ကကောတွင် ရင််းနှင့်် တု်းကု ထုတ်ယူပြေင််းပဖစ်ြါသည်။ ရရှလောအသော ရင််း နှီ်းမ္ ော်းကု ဉောဏ်ကကီ်းရှင်အကော်ဖီမ္ှ အကော်ဖီဝယ်ယူပြေင််း တွက်သော သံု်းြေ ပြီ်း အကော်ဖီအစ့်ကုေ်ကကမ္်မ္ ော်း ပဖစ်ထမ္််းသမ္်အြ်းထော်းြါမ္ည်။ ၆ လ ကကောတွင် ထည့််ဝင်သည့်် အငွအကက်း လုက် တု်းရောြေုင်နှုေ််းမ္ ော်းရရှမ္ည့်် ပြင် ဉောဏ်ကကီ်းရှင် လုြ်ငေ််းနှင့်် ဆက်စြ်သည့််လုြ်ငေ််းမ္ ော်းမ္ှ ထူ်းအလ ော့်အကက်းအငွမ္ ော်းကု ရရှြါမ္ည်။ ရင််း နှီ်း ထည့််ဝင်အငွမ္ ော်းကု ၁ ြတ်ကကြိုတင် အကကောင််းကကော်းပြီ်း ပြေ်လည် ထုတ်ယူနုင်ြါသည်။ ထည့််ဝင်သူမ္ ော်း တွက် စည်ကမ္််းြေ က်မ္ ော်းကု အသ်းစတ်ကကြိုတင်ဖတ်ရှုပြီ်း စောြေ ြိုြ်ြေ ြိုြ်ဆုလက်ြေံရယူြါမ္ည်။ ဉောဏ်ကကီ်းရှင်လုြ်ငေ််းမ္ှ ဆက်လက်ြေ ြို့ထွင်လ က်ရှအသော ပြေော်းအသောလုြ်ငေ််းမ္ ော်းတွင် ရင််းနှီ်းပမ္ြိုြ်နှံလုြါကလည််း အသ်းစတ်အဆွ်းအနွ်းနုင်ြါသည်။
7. ထည့််ဝင်ရမည့််ကင မာဏ နှင့်် ခစာြီးခင့််မ ာြီး SILVER GOLD DIAMOND အနည်ြီးဆိုြီး ထည့််ဝင်ရမည့််ကင မာဏ USD 100 USD 5000 USD 10000 အတိုြီးရာခိုင်နှုန်ြီး (၆လ) ၁၂ % ၁၅ % ၁၈ % ၆လအကကာတင် ရရှမည့်် တိုြီးရင်ြီးက ေါင်ြီး USD 112 USD 5750 USD 11800 ရင်ြီးနှီြီးခမြု ်နှသူမ ာြီး ရရှမည့်် ခစာြီးခင့််မ ာြီး (DISCOUNT %) ECO-TOURISM/COFFEE ORIGIN TOUR ၂၅ % ၅၀ % ၇၅ % ထိုတ်ကိုန်မ ာြီး ဝယ်ယူခခင်ြီး ၂၀ % ၂၅ % ၃၀ % စက် စစည်ြီးမ ာြီး ဝယ်ယူခခင်ြီး ၅ % ၁၀ % ၁၅ % သင်တန်ြီးမ ာြီး ၂၅ % ၃၀ % ၄၀ % ကမြီးကလ့်ရှကသာကမြီးခန်ြီးမ ာြီး ၁။ ဘယ်အလောက် ေည််းဆံု်း/ မ္ ော်းဆံု်း ထည့််လု ့်ရသလ? ၂။ လူတစ်ဦ်းတစ်အယောက်ထက ကကမ္်ကကမ္်ြေွပြီ်းထည့််လု ့်ရလော်း? ၃။ ဘယ်အတော့် စထည့််ရမ္ှောလ? ၄။ ဘယ် ြေ ေ်မ္ဆု ရင််းနှီ်းအငွကု ပြေ်ထုတ်လု ့်ရလော်း? ၅။ ထည့််ဝင်ထော်းသည့််အငွမ္ ော်းကု မ္ည်သု ့် သံု်းြေ သည်ကု သနုင်ြါသလော်း? ၆။ နုင်ငံပြေော်းသံု်းအငွမ္ ော်းကု လက်ြေံြါသလော်း? ၇။ ရင််းနှီ်းပမ္ြိုြ်နှံမ္ှုမ္ ော်းကု မ္ည်သု ့်အြ်း ြ်ရမ္ည်ေည််း? ၈။ ြေံစော်းြေွင့််မ္ ော်းကု ပြေော်းသု ့်လွအပြောင််းြေွင့််ရှြါသလော်း? ၉။ ဆက်သွယ်ရမ္ည့်် တောဝေ်ြေံနှင့်် ဖုေ််းေံြါတ်ကို သချင်ပါတယ်? ၁၀။ ရင််း နှီ်းထည့််ဝင်သူမ္ ော်း ော်း အကော်ဖီအစ့်/မှုန် ့်အရောင််းြေ အရ်း ကုယ်စော်းလှယ် ပဖစ်နုင်ြါသလော်း? ၁၁။ နုင်ငံပြေော်းက လူအတွနှင့်် ေယ်ကလူအတွက စောြေ ြိုြ်ကစစကု ဘယ်လု လုြ်ကကမ္လ? ၁၂။ ြေံစော်းြေွင့််က သက်တမ္််းရှသလော်း?
8. ကမြီးကလ့်ရှကသာကမြီးခန်ြီးမ ာြီးနှင့်် အကခဖမ ာြီး ၁။ ဘယ်အလောက် ေည််းဆံု်း/ မ္ ော်းဆံု်း ထည့််လု ့်ရသလ? - ေည််းဆံု်းအငွြမ္ောဏ ၁သေ််းကအေ မ္ ော်းဆံု်းက ကကြိုက်သအလောက်ထည့််လု ့်ရြါတယ်။ ရောသီ ြေ ေ် ရမ္််းအေောက်က ပြီ်း အကော်ဖီဝယ်ဖု ့်မ္ရှအတော့်တ့် ြေ ေ်မ္ှောအတော့် ရင််းနှီ်းအငွကု လက်မ္ြေံြါဘူ်း။ ၂။ လူတစ်ဦ်းတစ်အယောက်ထက ကကမ္်ကကမ္်ြေွပြီ်းထည့််လု ့်ရလော်း? - တစ်ဦ်းတစ်အယောက်ထက ကကမ္်ကကမ္်ြေွပြီ်း ရင််းနှီ်းပမ္ြိုြ်နှံလု ့်ရြါတယ်။ စထည့််တ့် ြေ ေ်ကအေပြီ်း ြေ ေ်ကောလ (၆)လကကောမ္ှော ထုတ်ရမ္ှောပဖစ်တ့် တွက် ကကမ္်ကကမ္်ြေွထည့််တောကု လက်ြေံြါတယ်။ တစ်ြေ ြိုြို့က လစောကု ထည့််မ္ှောပဖစ်လု ့်လက်ြေံအဆောင်ရွက်အြ်းြါမ္ယ်။ ၃။ ဘယ်အတော့် စထည့််ရမ္ှောလ? - နုဝင်ဘောလ ြထမ္ြတ်ကအေ စတင်လက်ြေံပြီ်း စောြေ ြိုြ်ြေ ြိုြ်ဆုြါမ္ယ်။ စောြေ ြိုြ်ြေ ြိုြ်ပြီ်းအေောက် Partner Card မ္ ော်းထုတ်အြ်းသွော်းြါမ္ယ်။ က ြို်းြေံစော်းြေွင့််မ္ ော်းကု ြေံစော်းနုင်ရေ် ကေ် ပြသရေ်လု ြ်ြါတယ်။ ၄။ ဘယ် ြေ ေ်မ္ဆု ရင််းနှီ်းအငွကု ပြေ်ထုတ်လု ့်ရလော်း? - ဘယ် ြေ ေ်မ္ဆုရင််းနှီ်းအငွကု ပြေ်ထုတ်လု ့်ရြါတယ်။ တစ်ြတ်ကကြိုတင်အပြောဖု ့်လုြါတယ်။ (၆)လ တွင််း ပြေ်ထုတ်မ္ည်ဆုြါက က ြို်းြေံစော်းြေွင့််မ္ ော်း ရရှမ္ှော မ္ဟုတ်ြါဘူ်း။ ၅။ ထည့််ဝင်ထော်းသည့််အငွမ္ ော်းကု မ္ည်သု ့် သံု်းြေ သည်ကု သရှနုင်ြါသလော်း? - ရင််းနှီ်းပမ္ြိုြ်နှံမ္ှုမ္ ော်းကု အကော်ဖီအစ့်ကုေ်ကကမ္််းမ္ ော်းသော ဝယ်ယူပြီ်း သုအလှောင်ထော်းြါမ္ည်။ လုြ်အဆောင်အေအသော လုြ်ငေ််းစဉ်မ္ ော်း အသ်းစတ်ကု မ္ှတ်တမ္််းမ္ ော်းလုြ်အဆောင်ထော်းပြီ်း ဓါတ်ြံုရုက်ကူ်းပြီ်း ီ်းအမ္်းလ်ပဖင့်် ပြေ်လည်ြု ့်အြ်းြါမ္ည်။ ၆။ နုင်ငံပြေော်းသံု်းအငွမ္ ော်းကု လက်ြေံြါသလော်း? - ရင််းနှီ်းပမ္ြိုြ်နှံအငွမ္ ော်းကု နုင်ငံပြေော်းအငွပဖင့်် လက်ြေံြါသည်။ ပြေ်လည်ထုတ်ယူသည့်် ြေါတွင် နုင်ငံပြေော်းအငွပဖင့်် ပြေ်လည်ထုတ်ယူနုင်ြါသည်။ ၇။ ရင််းနှီ်းပမ္ြိုြ်နှံမ္ှုမ္ ော်းကု မ္ည်သု ့်အြ်း ြ်ရမ္ည်ေည််း? - ရင််းနှီ်းပမ္ြိုြ်နှံအငွမ္ ော်းကု ကုယ်တုင်လောအရောက်အြ်း ြ်ပြေင််း၊ ပြည်တွင််းဘဏ်မ္ ော်းသု ့် အငွလအြ်းြု ့်ပြေင််းနှင့်် စင်ကောြူ၊ ထုင််းနုင်ငံမ္ ော်းရှ ဘဏ်စောရင််းသု ့်အြ်းြု ့်ပြေင််းပဖင့်် အြ်း ြ်နုင်ြါသည်။ ၈။ ြေံစော်းြေွင့််မ္ ော်းကု ပြေော်းသု ့်လွအပြောင််းြေွင့််ရှြါသလော်း? - ရင််း နှီ်းပြေ်လည်အြ်း ြ်အသော ြေါ ြေံစော်းြေွင့််ရှသူကု တစ်ဦ်းထက်ြုမ္ု ထည့််သွင််းနုင်အသော်လည််း ပြေော်းြေံစော်းြေွင့််မ္ ော်းကု ပြေော်းသု ့်လွအပြောင််းြေံစော်းြေွင့်် မ္ရှြါ။
9. ၉။ ဆက်သွယ်ရမ္ည့်် တောဝေ်ြေံနှင့်် ဖုေ််းေံြါတ်? - ဆက်သွယ်ရမ္ည့်် တောဝေ်ြေံမ္ှော ဦ်းအငွထွေ််း၊ ြုင်ရှင်၊ ဉောဏ်ကကီ်းရှင် ရှမ္််းအတောင်ပမ္င့််အကော်ဖီလုြ်ငေ််း၊ ၀၁- ၈၅၀၀၅၃၈၊ ၀၉၄၂၂၄၄၄၄၀၃ နှင့်် ngwetun@geniuscoffee.info သု ့်ဆက်သွယ်အမ္်းပမ္ေ််းနုင်ြါသည်။ ၁၀။ ရင််း နှီ်းထည့််ဝင်သူမ္ ော်း ော်း အကော်ဖီအစ့် အရောင််းြေ အရ်း ကုယ်စော်းလှယ် ပဖစ်နုင်ြါသလော်း? - အရောင််းြေ အရ်းကုယ်စော်းလှယ် ပဖစ်လုြ်အဆောင်လုြါက သတ်မ္ှတ်ြေ က်မ္ ော်းကု လုြ်အဆောင်နုင်သူမ္ ော်း တွက် ထူ်း ြေွင့်် အရ်း ပဖစ် ေယ်အပမ္တစ်ြေုတွင် တစ်အယောက်နှုေ််းထော်းရှ အြ်းြါမ္ည်။ ၁၁။ နုင်ငံပြေော်းက လူအတွနှင့်် ေယ်ကလူအတွက စောြေ ြိုြ်ကစစကု ဘယ်လု လုြ်ကကမ္လ? - နုင်ငံပြေော်းတွင် အရောက်ရှအေထုင်သူမ္ ော်းနှင့်် ေယ်တွင်အေထုင်သူမ္ ော်းမ္ှ အငွလွလုြ်ငေ််းအဆောင်ရွက်ပြီ်းြါက စောြေ ြိုြ် ၂ အဆောင်ကု လက်မ္ှတ်အရ်းထု်းပြီ်းအြ်းြု ့်ြါမ္ည်။ လက်မ္ှတ်အရ်းထု်းပြီ်း ၁ အဆောင်ကု ပြေ်လည်အြ်းြု ့်ရြါမ္ည်။ ၁၂။ ြေံစော်းြေွင့််က သက်တမ္််းရှသလော်း? - ြေံစော်းြေွင့််မ္ ော်း တွက် သက်တမ္််းမ္ှော ထည့််ဝင်သည့်် ရက်စွမ္ှ ၁ နှစ် သက်တမ္််းပဖစ်ြါသည်။
San Myanmar Proposal